Abahlinzeki beSweeteners kanye neFektri | Abakhiqizi base China Sweeteners
I-D-mannitol, uhlobo lweshukela lotshwala, yaziwa nangokuthi d-mannitol.D- melitol; Manna melitol; D-mannitol; Acid; Piperan mannose ushukela, njll.
Impuphu emhlophe engenambala noma emhlophe efana ne-sucrose enambitheka kamnandi Kwezokwelapha, ukudla, okuphakelayo, ucwaningo lwesayensi yezempilo lunendima ethile.
I-Sorbitol uhlobo olusha lwe-sweenter elenziwe nge-glucose ehlanjululwe njenge-hydrogenation refining, egxila .Lapho lumuncwa ngumzimba womuntu, lisakazeka kancane kancane bese lixhuma libe yi-fructose, bese libamba iqhaza ku-fructose metabolism.
Manje isithiyo esikhulu ku-stevia kwakuwukuqonda komthengi.Stevia ushukela ushukela wemvelo okhishwa emaqabungeni e-stevia, unezici ezihlukile, njengobumnandi obukhulu, ama-calories aphansi.Ushukela we-inulin izikhathi ezingama-180-450 ze-sucrose. imiphumela ikhombise ukuthi ushukela we-stevia unguswidi ongeyena owe-cariogenic.Stevia njenge-sweetener yemvelo yobushukela obuphezulu inani eliphansi le-calorific lisetshenziswa kakhulu ekudleni, ekuphuzeni, ekwenziweni kwemithi, kugwayi, izimonyo, ama-liqueurs, umuthi wokuxubha, izinongo, usawoti ...
I-Sucralose iyi-sweetener yokufakelwa engena esikhundleni se-zero-calorie. E-European Union, yaziwa nangaphansi kwenombolo ye-E (ikhodi yokufaka) E955. I-Sucralose icishe iphindwe ka-600 njengoshukela njengo-sucrose (ushukela wetafula), iphindwe kabili njengoshukela, nezikhathi eziyi-3.3 njengoshukela njenge-aspartame. Ngokungafani ne-aspartame, izinzile ngaphansi kokushisa nangaphezu kwezimo ezahlukahlukene ze-pH futhi ingasetshenziswa ekubhakeni noma kwimikhiqizo edinga impilo eshalofini ende. Impumelelo kwezentengiso yemikhiqizo esekwe ku-sucralose ...
I-Trehalose, eyaziwa nangokuthi i-mycose noma i-tremalose, iyi-disaccharide exhumene ne-alpha eyakhiwe i-α, α-1,1-glucoside bond phakathi kwamayunithi amabili we-α-glucose. Ngo-1832, abakwa-HAL Wiggers bathola i-trehalose ergot of rye, futhi ngo-1859 uMarcellin Berthelot wayihlukanisa nemana ye-trehala, into eyenziwe izikele, wayiqamba ngokuthi i-trehalose. Ingakhiwa ngamabhaktheriya, isikhunta, izitshalo nezilwane ezingenamgogodla. Kuyathinteka ku-anhydrobiosis - ikhono lezitshalo nezilwane ukumelana isikhathi eside ...
Igama lomkhiqizo I-Sorbic Acid CAS No. 110-44-1 EINECS No. 203-768-7 Ukubukeka izinaliti ezingenambala noma impuphu emhlophe egeleza mahhala, enephunga elincane lesici iBanga Ukudla Ibanga MF C6-H8-O2 Isisindo 25kg / isikhwama Shelf Life 2 Isitifiketi seminyaka i-HACCP, i-ISO, i-KOSHER, i-HALAL Ukupakisha izikhwama ezingama-25kg I-Sorbic Acid iyancibilika emanzini futhi ingasetshenziswa njengeziLondolozo. I-Sorbic Acid ingasetshenziswa kabanzi njengesithako sokudla noma isithasiselo sokudla empilweni yethu yansuku zonke. I-Sorbic Acid ikakhulukazi u ...
I-Xylitol iyi-sweetener eyenzeka ngokwemvelo engu-5-carbon polyol. Itholakala ezithelweni nasemifino, futhi ikhiqizwa nangumzimba womuntu uqobo. Ingabamba ukushisa lapho ichithwa emanzini, ngomsebenzi obamba umswakama, futhi isifo sohudo esidlulayo singabanjiswa lapho sithathwe ngokweqile. Umkhiqizo nawo ungaphatha ukuqunjelwa. I-Xylitol iyona emnandi kunawo wonke ama-polyols. Imnandi njenge-sucrose, ayinayo i-after-taste futhi iphephile kubantu abanesifo sikashukela. I-Xylitol inama-calories angaphansi kuka-40% kunoshukela futhi, yalokhu ...
I-Aspartame Sweetener, Uhlobo lwe-Arshine Aspartame
Ama-Sweeteners 100 Mesh Aspartame
Ama-Sweeteners 100 ~ 150 Mesh Aspartame
Ama-Sweeteners 20 ~ 60 Mesh Aspartame
Ama-Sweeteners 60 ~ 100 Mesh Aspartame
I-Sweeteners Fine Powder, i-200 Mesh Aspartame
Inani lento CAS No. 585-88-6 Amanye Amagama IMaltitol MF C12H24O11 EINECS No. Igama lomkhiqizo wokunikezwa kwe-Maltitol Ukubukeka Kwesitifiketi Esimhlophe se-Powder I-ISO Ibanga Lokudla I-Garde Isicelo Sokudla Okufakiwe Umbala Omhlophe I-Shelf Life Life Iminyaka engu-2 Ukusetshenziswa Kwama-Sweeteners Okuqukethwe Okuqinile 98.0% Min (1) Njengokudla okusebenzayo, ...
I-crystalline glucose, ngokomehluko wenqubo yokukhiqiza ingahlukaniswa nge-Dextrose Monohydrate ne-Dextrose Anhydrous. I-crystalline dextrose monohydrate ihlukaniswe nge-glucose esezingeni lokudla, i-glucose kanye ne-glucose yemithi yokudla yemithi esetshenziswa kakhulu ekusebenzeni kokudla nakwimboni yemifino. Ngokusebenzisa i-hydrogenation ye-glucose monohydrate ingaveza i-sorbitol, imithi ne-glucose monohydrate njengomuthi womlomo ikakhulukazi owokuqala (osizayo). I-Crystalline dextrose monohydrate cont ...
Inombolo ye-CAS: 149-32-6 Standard ngokuya nge: GB26404-2011 / USP32 / EP 7.0 / FCCIV Mesh size: 14-30, 30-60, 18-60, 100mesh Erythritol, a polyol (ushukela utshwala), iyi ukunambitha okuhle okunambitheka okuningi okulungele izinhlobo ezahlukahlukene zokwehliswa kwekhalori nokudla okungenashukela. Kube yingxenye yokudla komuntu izinkulungwane zeminyaka ngenxa yokuba khona kwayo ezithelweni nakokunye ukudla. I-Erythritol inokubekezelelana okuphezulu kokugaya ukudla, iphephile kubantu abanesifo sikashukela, futhi ayikhuthazi ukubola kwamazinyo. Ukushisa okuhle kakhulu ...
1.Industrial Dextrosewaste ukwelashwa kwamanzi. I-2.Dextroseis isetshenziswa ngokuyinhloko njengesakhi somjovo (umjovo we-glucose); I-3.Dextrose embonini yezokudla: isetshenziswa kabanzi embonini kashukela yamanje. I-Dextrose yisakhi esibalulekile semetabolism emzimbeni. Umkhakha we-4.pharmaceutical ungasetshenziswa ngqo embonini yokuphrinta nokudaya njenge-ejenti yokwehlisa, embonini yesibuko nenqubo yamabhodlela wamanzi ashisayo yenqubo yokufaka isiliva evame ukusetshenziswa njenge-ejenti yokwehlisa. Ukuhlaziywa kwe-conten ...